Ukuzilibazisa kunye Nemisebenzi LokuLoba kwamanzi
by URon Brooks
Indlela yokuqalisa ukuThola iNtlanzi
Ubuncinane bokuTrolling Basics Ukubhala, nokuba ngaba kufuphi nxweme okanye kwi-offshore, ngokuqhelekileyo kuyindlela evelele kakhulu yokubamba iintlobo ezahlukeneyo zamanzi e-gamefish. Ukusuka kwamanzi e-pelagics yamanzi aluhlaza okwesibhakabhaka ukuvalela kwiintlanzi ezantsi, i-trolling idla ngokubalulekileyo ekubambeni okulungileyo. Sekunjalo, abaninzi abantu abasebenzisa le ndlela mhlawumbi ngenxa yokuba baye bafumana impumelelo encinane kwixesha elidlulileyo, okanye ngenxa yokuba abazange bafunde ubuchule bokuqala.
Ngomyinge we-angler, i-trolling ingaphulwa ibe yintlangano yezintlu ezine ezilula-ezikhawulezileyo okanye ezicothayo, ezingacacanga okanye ezinzulu.
Oku kunokuba yinto elula ukuba uyayazi imikhwa yentlanzi oyifunayo.
Okokuqala, inkokheli yocingo iyimfuneko enkulu kwihlabathi eliphangaleleyo. Ucingo luvimbela i-pelagics ekunqumeni umgca wakho emlonyeni okanye emsila onamandla. Iinqununu ezintlanu ukuya ezintandathu zenkokheli yocingo kufuneka ixhunywe kwiinyawo ezili-10 zomgca ombini. I-Snap iqhubela phambili ukuvumela ukutshintsha okukhawulezayo kweenkokheli. Ngokuqhelekileyo kuninzi, intlanzi entle iya kufaka i-kink kwi-wire kunye ne-snap swivel ikuvumela ukuba ufake enye inkokheli engaphambili ngaphandle kokuyeka.
Ubungakanani besikhombi kufuneka bufanise i-bait. Amagwegwe amancinci kumabhobho amakhulu okanye iigwegwe ezinkulu kwiimbambo ezincinane azisebenzi. Ukuthabatha iinkokeli ezininzi zangaphambi kwezigodo ezinokhenketho ezivela ku-5/0 ukuya ku-9/0 Kunconywa - unokuthi uphawule i-ballyhoo usebenzisa i-hook ye-8/0 uze ufumane phakathi kwesikolo sentlanzi encinci.
Ngaloo nto utshintshela kwinkokeli nge-hook ye-5/0, uvumela ukufumana ngaphezulu kweemigomo emincinci.
Indlela engafihliyo ye-trolling ibhekisela kwisibilini, kungekhona ubunzulu bamanzi. Ngamanzi aluhlaza - i-Gulfstream - amanzi aya kuba ngamanqina angamawaka amaninzi, ngelixa i-bait yakho ilungile.
Le ndlela yokuthungatha isetyenziswe ngama-anglers kunye neenqanawa zeshayibrari zijonge ngokuyinhloko i-billfish, yahoo, okanye i-mahi mahi (dolphin). Zonke ezi ntlobo zondla kwizikolo zeentlanzi ezihlala phezu komhlaba. I-Ballyhoo, intlanzi ehambahambayo, kunye nezikolo zebhonito encinci zigijimela kufuphi kwaye zibonelela ngokutya okuninzi kwezi zixhobo zamanzi ezihlaza.
Indlela yokuphepha yemvelo yale baitfish ukuba igijime ngokukhawuleza kwaye iphinde ithambele emanzini kumgama othile. Intlanzi ehamba ngeenqanawa iya kuhamba i-airborne ize ihambe idide ezilikhulu okanye ngaphezulu ukuze iphunyuke. Unokubabona bebhanki ngosuku oluvuthayo kwaye ngokuqinisekileyo ujikeleza kunye nangaphezulu kwesihlwayo sakho.
I-bait yakho yokutyikitya kufuneka ixelise i-bait yemvelo. I-troll yokukhawuleza "eqaqa" i-bait emgangathweni ilungile. Iimitha ezinhlanu ukuya ezintandathu - sebenzisa i-tachometer yakho ukugcina isantya sejinjini rhoqo - iya kugcina i-ballyhoo okanye intlanzi ehambahambayo kwaye iphoqa phezu kwamanzi.
Ukubhala ngokubamba ukutyelela kubhekiselele ekutheni ukukhwabanisa, kunye ne-trolling encane ayikho. Ingaba uhlala okanye ufile, isikhombi sifanele sibekwe okanye kwi-bait ngendlela engayi kukhulula. Iziza ezininzi kwiwebhu zinemifanekiso ecacileyo kunye nemifanekiso yokufundisa ama-anglers amacandelo okukhangela okuphambili.
Sebenzisa ikhonkco yempumlo okanye isikhwele ekhaleni lebhodi oceba ukuyirha. I-skirt eneempumlo ezinemibala ithatha kokutsala intlanzi kunye nokugcina i-bait iphephile kwi-hook.
I-Trolling anglers, ngokukodwa abo bafuna i-billfish, bavame ukusebenzisa ii-baits zokufakelwa. I-Sail kunye ne-marlin ziyakhangwa kwi-bait trolled spread by lures big gutifical ebizwa ngokuthi i-teasers. Ngokuqhelekileyo i-teasers ayinayo i-hook; ekusasazeni kweebhanki ezininzi zokuhamba, iintlanzi ziza kubetha enye yeebhanki ezilandelelanayo, kwaye ezo ziboshwe ngamagwegwe.
Esinye isilungele kakuhle xa uncinane (25-foot okanye ngaphantsi, isikhonkco se centre) isikebhe sisetyenziselwa ukusasazwa kwezibhozo ezithandathu. Abanye bambiza ukusabalalisa "amabini abuyele, amabini emibini, kunye namabini aphezulu." Ungaphinda ubeke eminye imigca ephantsi, oku kuthetha ukuba unamabhagi adibeneyo adibanisa kakuhle "ngasemva" emva kwesihlwayo, amabhabhu amabini ehla "ngaphandle" kwiindawo ezihamba phambili zeendlela zokuhamba ngeenqanawa, kunye neebhanki ezimbini zeplati yeplati ewela ngaphakathi kwindawo yokuhlamba.
Umgca weplati uhamba ngokuthe ngqo ukusuka kwi-reel ukuya kwi-bait kwaye ungasebenzisi i-outrigger.
Ngamanye amaxesha iintlanzi ziza kulandela ukulandelelana kwaye zifune ukubetha. Ndiye ndiphanga elwandle olulandelayo kwaye ndibukele isikolo saman mahi ukubhukuda emanzini, esilandela ngasemva kweeits. Xa oko kwenzekayo ndiya kubanika "ukushisa". Ndiya kwandisa ijubane ukwenzela ukuba ii-baits zigijime ngokukhawuleza kwaye zityumle. Ngokuqhelekileyo ihoxisa isiteyimu. Ukuba bayaqhubeka belandela, ndiza kuyimisa isikhephe kwaye ndivumele ukuba ii-baits zitshise.
Ngamanye amaxesha isiteleka siza kwenzeka xa ama-baits ehla. Ukuba akunjalo, ndiyiphinde ndiyikhawuleze ibe yinqwelo kwaye ndikhawuleze, ndiyifumene ukukhwabanisa okuzama ukusinda. Ngexesha elithile kulo mzamo, intlanzi iya kufakwa. Kuba ngumba wokugqiba oko intlanzi iyakuthanda.
Ukubhala ngokungaqhelekanga kwaye ngokukhawuleza kudla ngokubhekisela kwintlanzi yokuphila ethile. Ingaba iifologi (i-menhaden shad), i-ballyhoo, okanye i-eyeggg eye, i-bait live iyakwazi ukugibela umncinci. Oko kuthetha ukuthatyathwa ngokukhawuleza njengoko injini yakho iya ku vumela, ngokuqhelekileyo ukuhamba ngokukhawuleza ukugcina umlenze emva kwesihlana.
Iibhola eziphilayo zingabhalwa kwi-free line emva kwesinqanawa okanye kwi-downrigger. Injongo efanayo yesikhokelo iyimfuneko, kodwa apho umthetho uvumela khona, ikhonkco elixhamlayo kwiintshi ezithandathu zenkokheli yocingo iqhotyoshelweyo kwaye idibanisa kwi-hook enkulu. Le "stinger" hook isoloko ibambelela intlanzi, kuba izibilini zihlala zikhawuleza ngendlela yokuhlaselwa kwesidumbu.
Ukuthungatha kubamba iintlanzi ezininzi!
Kwiinqanawa ezingenayo iinjinisi ngokukhawuleza kunesivinini esinqwenela ukuhamba, izikhwama zokukhupha eziboshwe ngasemva zinganciphisa isikhephe ngokuphawulekayo. Nangona kunjalo, xa intlanzi igxininiswa, qiniseka ukukrazula isikhwama okanye iibhegi kwisikhephe ukuze ugweme imigca edibeneyo kwaye ulahlekelwe intlanzi!
Enye yeyona ndlela ekhethekileyo yokuhlawula i-bait indlela enokuthi ithathwa njenge-trolling yi-kite yokuloba. Nangona ingekho i-technically trolling ingqiqo yokwenene, ibandakanya ukugcina isikhephe sinyanzela ngokwaneleyo ukugcina i-kite ngokufanelekileyo ibeke emva kwesihlana.
Ukuloba kwe-Kite kudinga intonga ekhethekileyo apho i-kite ihamba khona. Iqhotyoshela umgca wekite ubeka umgca ukusuka kwintonga yokuloba kunye kunye nokuhlambalahla kuhla phantsi komgangatho phantsi kwekite. Xa intlanzi ibetha, umgca wokuloba ukhutshwa kwi-kite kwaye kulwa! I-kite yenza njenge-outrigger esibhakabhakeni, ukukhulula umgca wokuloba xa kuthathwa i-bait.
Isihluthulelo sokuloba kwe-kite esiphumelelayo siqhuba isikebhe kunye ne-kite ukwenzela ukuba isilwanyana esibukhoma, sibophe ngasemva ngaphantsi kwe-endorrhea, siphuma kwaye siphuma emanzini, sibhukuda ngqo phezulu. Umoya uphazamisa kunye nokutshatyalaliswa kwamanyathelo kuya kuthatha umlenze nje emanzini, kwaye ukuqhuma kunye neengqungquthela ezenziwe ngumbhobho ukubuyela ngaphantsi kwamanzi yi-bell dinner!
Ukubhala kakuhle phantsi komhlaba kungenziwa ngeendlela eziliqela. Ezinye izilwanyana zokufakelwa zenzelwe ukumba phantsi kwaye zigijime ngokujulile-ngamanye amaxesha zibe zizinzulu njengeenyawo ezingamashumi amathathu ezingahambisani nezisindo. Umgca womnxeba, kunye neentambo ezikhethekileyo zokuloba, unokuthatha ibhola phantsi kwikholamu yamanzi. Mhlawumbi indlela elula kunye neyona ndlela eqhelekileyo yokufumana isiqhelo phantsi i-downrigger.
Umgca wocingo ufuna intonga eyenzelwe ukuphatha umgca wocingo, kwaye ngokwenene ayinakukucingwa njengendlela "elula" yokuthambisa.
Ukusetyenziswa ngokufanelekileyo kweenkokheli, ukunyathelisa izixhobo kunye neenkokheli ezothusayo zenza olu hlobo lokubamba kunzima kunezinye iindlela.
Ngaphandle kwimizila ejulile yokusebenza, i-downrigger yindlela elula kakhulu yokufumana ukujula phantsi. Kanye nje ngokuba i-kite rig igqithisa isibhakabhaka esibhakabhakeni, i-downrigger yenza njengento engaphandle kwamanzi. Ukufanekisa kubhekiselele ekubeni umgca wokuloba unqamle kwi-downrigger kwaye ukuba umgca ukhishwa xa intlanzi ibetha.
Ukuhlaselwa kwezilwanyana zemvelo kufuneka kusebenze okwenyaniso-kuthetha ukuba akufanele baphambuke ngaphantsi kwamanzi xa bebhaliswe. Ukutshiza akusiyo yendalo kwaye kuya kuthintela intlanzi ukuba ingabetha. Ngoko ke, ukuqwalasela ngokukodwa kwindawo yakho yokubeka isikhombi kunokuthi umele umehluko phakathi kwentlanzi kunye neentlanzi.
Ukubhala kungabonakala kunzima okanye kulula njengoko ufuna ukuyenza. Khumbula izinto ezisisiseko, kwaye zigcine zilula kwaye uya kuba nempumelelo enkulu. I-Trolling ihlanganisa indawo engakumbi yokuloba ngexesha elifutshane kunanoma yiphina enye indlela. Kwakhona ngokubanzi ithetha inhlanzi enkulu, ngoko ulungiselele ngokufanelekileyo! Beka imigca, cwangcisa ikhosi, kwaye uhlale kwaye ukhulule! Yishiye enye intlanzi emva kwezibhokhwe zakho!
Indlela yokuloba i-Grass Flats
Ubusuku boBuququzeleli beGigging
Indlela Yokusebenza Ngolwandle Olulandelayo
Eyona ndlela ihamba phambili kwiTrolling Motors
Indlela Yokuqokelela Imfucu Ephilayo ngeNtloko yeJig
UkuThuthukiswa kweSalmon yokuThuthuka
I-Northeast Florida i-Redfish Hotspots
Bounce Balling eHarbutbut
Iindlela eziPhambili zeToakfish
Iingcebiso zokuLoba ebusuku
Ukuloba kunye neTide
Indlela yokufumana i-Your Own Live Bait
Ukholo lukaThixo 101: Isingeniso kwizinto ezikholelwa kuThixo kunye no-Atheists
I-Steelhead UkuLoba kwiCentral California
USylvia Plath: Inkcazo ye-I-Mid-20th Century Poetic Icon
Iifrentshi zesiFrentshi ngeShumi
Iindleko zokunyuka kweeShenxe ezisixhenxe
Indlela Yokufumana Ukhuseleko, Ulonwabo, kwaye Uphumelele Ngentsimi Yokuhamba Nabafundi Bakho
Ukuqhuma kweDrunk Driving Ulwaphulo-mthetho
I-Summer Beach Ufunda i-Bestsellers
Yintoni ekhohlakeleyo kwiCawa yamaKristu
I-10 ye-Indie ye-Romantic Movies
Yintoni ongayithatha kwi-Dayhike yakho yokuqala
AmaYiputa aseMandulo ayibiza njani iYiputa?
Ukukhangela kunye neSimboli emva kweGosa leMexico
Ukukhanyisa Igumbi leTennis eTables
Iindlela zeNtshonalanga yamaMveli